Google Ads Audit : Makà maimaimpoana amin'ny Google Ads Analysis
Get farany indray mitete avy amin'ny ads fanentanana amin'ny Clever Google Ads Audit
Hatsarao ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny Google Ads ho ambany.
Araho maimaimpoana izao ny fanentanana Google Ads nataoko
Manomeza naoty segondra monja ny fampielezan-kevitrao Google Ads .
Amin'ny indray mipy maso fotsiny. Clever -tsaina dia manome naoty ny fampielezan-kevitra Google Ads . Rehefa manana teboka fanombohana ianao dia mametraha tanjona.
Ny fanazavana ilainao. Ary ny fomba fampiasana azy io.
Clever Audit dia manome sosokevitra ny fanatsarana hanatsarana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny Google Ads amin'ny alàlan'ny torohevitra sy tolo-kevitra vonona hampiasaina. Ireo torohevitra ireo dia voarindra arak'izay mety ho vokany eo amin'ny zava-bitanao.
Ampiharo fanatsarana in iray tap.
Clever Audit dia natao manokana hahafahanao mampihatra torohevitra izay tena mahaliana anao. Ampiharo fotsiny ireo izay tadiavinao. Ao anaty tsindry iray.
Hanatsarana ny fampielezan-kevitra. Mametraha tanjona vaovao.
Topazo maso ireo fampielezan-kevitra ao amin'ny Google Ads nao ary avy eo hahitanao hoe inona ny torohevitra momba ny Clever Audit manampy anao hanatsara ny fahaizanao. Mandra-pahatonganao ny tanjonao.
Manatsara ny fanentanana Google Ads na aiza na aiza.
Ampiasao ny Clever Audit any amin'ny birao, na eny an-dalana, na eny amoron-dranomasina. Ity Google Ads ity dia natao hampisehoana tsara amin'ny fitaovana finday sy ny takelaka. Ankehitriny ianao dia afaka manatsara ny Google Ads amin'ny rantsan-tànanao fotsiny.
Ambaratonga ny fampielezan-kevitra, ary mitombo ny soa.
Raha vantany vao mahatratra ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny Google Ads ambony indrindra ianao, tonga ny fotoana handrefesana, hitombo ary hamoronana fanentanana bebe kokoa hahatratrarana mpihaino vaovao. Clever amin'ny alàlan'ny Clever Audit ny rehetra.
"Mora takatra sy ampiasaina ity fitaovana Google Ads Audit ity. Azoko atao koa ny mampihatra ny fanovana mivantana avy amin'ny dashboard izay mamonjy ahy mandritra ny ora maro. Nihatsara ny ROAS-ko!"
"Manana akanjo kely raharaha any amin'ny ny tanànako, ary ny Google Ads varotra indrindra no mitombo hatrizay manatsara azy Clever Ads . Fantatro izao izay tsy mandeha amin'ny tetikadiko Google Ads ary afaka mandray andraikitra mora foana aho."
"Clever Ads nandinika ny fampielezankevoko Google Ads teo noho eo sy maimaim-poana! Ny tena tiako indrindra dia ny fahafahako mamaritra mora foana izay doka misy tombony bebe kokoa, ahafahako mitantana tsara kokoa ny vola miditra amiko."
Manomboha manatsara ny fanentanana Google Ads
Get Hanaraha-maso maimaim-poana izao
Tsy miahy ny angona fiarovana. Jereo ny politika Fiarovana fiainan'olona.
Misimisy kokoa momba ny Clever Ads
Mianara bebe kokoa momba ny fitaovana izay hanampy anao hanery ny Google Ads amin'ny Google Ads
Ny Google Ads Audit nohavaozina noforonin'ny Clever Ads dia hampiseho aminao ny toerana ijanonanao sy ny halaviranao amin'ny fanentanana Google Ads voatsara indrindra. Hanao ny fandinihana Google Ads tanteraka ny fanentananay avy hatrany izahay, ary hilaza aminao izay ilainao hatsaraina mba hahazoana valiny tsara kokoa.
Vonjeo ny fotoana sy ny vola
Clever Ads Audit dia mikendry ny hanampy anao hitahiry vola amin'ny alàlan'ny fampandrenesana anao rehefa mandany vola be amin'ny teny fanalahidy sasany ianao, tsy voatsara ny tanjonao, ratsy ny isao kalitao, na tsy mandeha amin'ny olana maro hafa ny fanarahan-dia anao.
Izy io koa dia hanampy anao hamantatra ny fotoana mety ary hanome soso-kevitra hanisy teny fanalahidy miovaova be, hanatsara ny fametrahana anao, hamorona karazana fampielezan-kevitra vaovao, na hamita ny ads misy fanitarana bebe kokoa aza. Ajanony ny fandaniam-potoana mandritra ny fotoana hijerenao ny fampielezan-kevitrao sy ny vondrona dokanao mba hahitana izany valiny tsara izany. Mametraha tanjona dia holazainay aminao ny fomba hahatongavana any.
Raiso an-tanana ny iray monja Click
Ny Google Ads Audit mamela anao hampihatra ny tolo-kevitra rehetra ho azy ao anatin'ny tsindry iray monja. Afaka mampitombo sy mampihena ny tolotra ianao, mamorona fanentanana vaovao, doka ary fanitarana doka ary hanavao ny lasibatrao. Rehetra tsy miditra amin'ny interface Google Ads, mivantana avy amin'ny dashboard Google Ads Audit nay.
Fomba ahazoana mampiasa betsaka indrindra avy amin'ny Clever Ads Audit
Ny Google Ads dia mety ho mpiara-miasa amin'ny doka vaovao anao. Ento Google Ads ity mba hifehezana anao hatrany ny fampielezan-kevitrao. Araka ny efa fantatrao, ny Google Ads dia tsy asa indray mandeha, mila manamboatra fahazarana manodidina azy ianao ary mijery hatrany ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitrao. Google dia manolo-kevitra ny hanao Google Ads lalina farafahakeliny indray mandeha na indroa isam-bolana.
Tsy maintsy atao isam-bolana-Optimization
Miaraka amin'ny Google Ads Audit mahery anay, tsy mila tadidinao akory ny hanaovana izany. Hampahatsiahy anao izahay mba hanao fandalinana Google Ads tsindraindray, ka ny tokony hataonao fotsiny dia ny miditra amin'ny lampihazo ary manao fanadihadiana Google Ads vaovao amin'ny tsindry iray. Avy eo ianao dia hahazo lisitra feno ny toro-hevitra sy ny tolo-kevitra amin'ny Google Ads voalamina arakaraka ny mety ho fiantraikan'izy ireo amin'ny fampielezan-kevitrao. Manoro hevitra anao izahay handinika ireo torohevitra misy fiatraikany be dia be, ary avy eo rehefa avy nampihatra ireo izay tianao ianao dia mandehana mankany amin'ireo izay misy vokany ratsy.
Isaky ny karatra tendron'ny tendrony dia hahita tolo-kevitra voalaza ianao miaraka amin'ny fampahalalana misimisy momba izany mba hizahanao tombony ny fampielezan-kevitrao rehefa mianatra bebe kokoa momba ilay lohahevitra. Tianay ny hitarika anao mandritra ny naha-manam-pahaizana momba ny Google Ads . Ny ankamaroan'ny torohevitra dia vonona hampiasaina izay midika fa ho afaka hampihatra azy ireo amin'ny alàlan'ny fanindriana bokotra iray fotsiny ianao.
Amin'ny fotoana manaraka anaovanao ny Google Ads Audit dia tsy hanana torohevitra vaovao fotsiny ianao hanatsarana ny fampielezan-kevitrao, fa ho azonao atao koa ny manamarina ny fandrosoanao raha ampitahaina amin'ny fanaraha-maso teo aloha mba hahafantaranao ny fiantraikan'ny toro-hevitra nampiharina nisy tamin'ny fampielezan-kevitra nataonao.
Mila fotoana sy faharetana ny fananana fanatsarana ny fampielezan-kevitra amin'ny Google Ads , fa tsy izao intsony raha manana an'ity Google Ads Audit ho mpiara-miasa aminao amin'ny asa ratsy ianao. Ny fotoana dia vola - izany no antony hanampianay anao hampitombo ny sandan'ny fotoananao sy ny fiverenanao amin'ny dolara doka rehetra laninao.
Fa maninona no ampiasaina ny Clever Ads ?
Ao amin'ny Clever Ads dia mirehareha izahay Premier Google Partners, noho izany azonao antoka fa 100% azo antoka sy azo antoka ny fizotrany rehetra, ary manaja ny fiainanao manokana izahay. Izahay dia efa nanampy orinasa maherin'ny 100.000 hanatsara ny paikadin'i Google Ads sy ny fahombiazany amin'ny vokatra tsara.
Nanova zavatra sarotra sy mandany fotoana be isika, ho lasa zavatra haingana, mora ary sahy lazainay fa mahafinaritra. Ho afaka "milalao" amin'ireo torohevitra ianao toa ny lalao, mba hahatratraranao ny isa ambony indrindra - sy ny ROI - alohan'ny hahatsapanao azy akory. Mandritra ny fotoana ianaranao bebe kokoa ho lasa mpitantana orinasa hendry kokoa sy za-draharaha mandritra izany. Amin'ny Clever Ads , ho fantatrao foana izay hatao manaraka satria afaka miantehitra aminay ianao amin'ny fanampiana amin'ny dingana manaraka.
Ny fahitanay dia ny orinasan-javatra samy hafa habe sy teti-bola tokony hanana fidirana amin'ny doka amin'ny Google. Izany no antony namolavolantsika an'ity Google Ads Audit maimaimpoana ity ho an'ny orinasa madinidinika mba hahafahan'izy ireo mifaninana amin'ny teny mitovy amin'ireo mpilalao lehibe kokoa izay manana teti-bola marketing lehibe kokoa. Tsy maninona ny antony itadiavanao manara-maso ny fampielezan-kevitrao: raha mieritreritra ianao fa mety hahomby kokoa ny fampielezan-kevitra Google Ads anao, na te hanamarina raha tena manao ny asany tsara indrindra ny masoivohonao, na angamba liana fotsiny ianao mikasika ny hoe raha mandaitra ny asanao, Clever Ads no fitaovanao.
Ankoatra izany, ny ekipa ny manam-pahaizana dia vonona lalandava ny hanampy anao, ary afaka hifandray azy ireo foana akory va fanontaniana, fiahiana, soso-kevitra, na mety mila fanampiana ianao amin'nyhi@cleverads.com
Tombontsoa iray hafa amin'ny fampiasana ny Clever Ads Audit dia ny fahafahanao miditra amin'ny vokatra marobe amin'ny dashboard Clever Ads , amin'izay ianao afaka manambatra ny herin'ny Google Ads Audit miaraka amin'ny fitaovana hafa izay hanampy anao hamorona karazana fanentanana Google Ads vaovao, hamorona sora-baventy vaovao ho an'ny asa aman-draharaha, na mahita hevitra teny fanalahidy vaovao ankoatry ny zavatra hafa. Vonona ny hanao ny asa rehetra ny fitaovana Google Ads amin'ny alàlanay rehetra, raha mampiasa ny fotoananao amin'ny zavatra tsara indrindra vitanao sy mitantana ary mitantana ny orinasanao ianao.
Tsy miahy ny angona fiarovana. Jereo nypolitika Fiarovana fiainan'olona.
Hangataka aminao izahay mba hidira ao amin'ny kaonty Google Ads anao handinihana izany sy hanadihady izany mba hahafahanay manome anao torohevitra manokana momba ny fanararaotana tsara ny fampielezan-kevitrao. Raisinay am-pahatokisana ny tsiambaratelo momba ny angon-drakitra ary angoninay izay ilainay mba hanomezana anao traikefa tsara indrindra azo atao.